3 MAZANO OKUDZIDZISA KABHODHI KABHODHI TUBES - KRISIMASI INOKOSHA | Mhizha On
3 Pfungwa dzekudzokorora makadhibhokisi machubhu uye kugadzira Kisimusi kushongedza
Irene Gil | | Kadhibhodhi mhizha, Akisimusi emaoko, Kudzokorora
Mune izvi Tutorial Ndichakudzidzisa 3 mazano saka unogona kushandisa zvakare iyo Kadhibhodhi machubhu yemapepa echimbuzi, bepa rekicheni, kuputira epurasitiki, tepi yekunamatira ... uye woashandura iwo ekushongedza kwakanaka kwe Navidad.
3 MAZANO OKUDZIDZISA KADHODHI KABHODHI TUBES
1.1 Mhete dzepaniki
1.2 Frozen krisimasi pendant
1.3 Kisimusi imba
2.1 Mhete dzepaniki
2.2 Frozen krisimasi pendant
2.3 Kisimusi imba
Kuti uite iyo mitatu yemhizha iwe yauchada sechinhu chakajairika chinhu Kadhibhodhi machubhu, asi isu tichashandisawo zvimwe zvinhu yakanangana nepfungwa yega yega.
Kisimusi yakashongedzwa semazaya echando, mistletoe, acorn, zvidiki zvepinecones ...
Frozen krisimasi pendant
Yakachena, tsvuku, nhema uye goridhe acrylic pendi
Bhora dzvuku kana pomponi tsvuku
Red eva rubber kana red cardboard
Circular kuchera muchina
Kadhibhodhi muti weKisimusi yekushongedza dzimba diki
In inotevera vhidhiyo-dzidziso unogona kuona kujekesa maitiro yeimwe neimwe yemazano nekudzokorora iyo Kadhibhodhi machubhu. Ivo chaizvo nyore uye nemigumisiro yakanaka kwazvo. Zvakare kukurumidza kuita, kuitira kuti kana panguva yekupedzisira uchitaridzika zvakanyanya kutenga kana kugadzira zvimwe zvishongo, unogona kuenda kune aya mazano zveupfumi.
Usakanganwa chero matanho kuitira kuti iwe ugone kugadzira iwo ekushongedza iwe pachako. Kune izvo ini ndinotsanangura pazasi nenzira yakapusa maitiro ekuita iyo mabasa matatu saka hauna kana dambudziko.
Kugadzira zvindori zve napkin unofanirwa kucheka kadhibhodhi chubhu kubva kudiki ne hafu, kubva ipapo iwe unogona kuwana zvindori zviviri zvejira. Namatira iyo tepi pakadhibhodhi uye ndokukomberedza zvese nazvo. Paunenge uchinge uine chubhu yakavharwa, sunga a tie neimwe ribhoni kana tambo yerimwe ruvara kuti iratidzike. Pakati pechiuno unogona kunamatira iyo chishongo iyo yawakasarudza. Ini ndakasarudzira imwe acorns uye kune imwe chando chematanda.
Runako rwechishongo ichi ndechekupa iko kuita kwe Frost, uye izvo zvatiri kuzobudirira ne chena kupenya. Kutanga iwe unofanirwa kucheka kadhibhodhi mu 8 mitsetse anenge 1cm yakafara. Svina magumo maviri emakadhibhokisi kuita denderedzwa zvishoma uye iwe uchagadzira chimiro chakafanana ne shizha. Gira 4 pamwe chete kumucheto mumwe uye gadzira cruz. Iwo mamwe asara iwe unonama pakati chaipo peimwe yeaya apfuura.
Chekai vamwe denderedzwa ina asi panguva ino vhura ivo, nekuti izvo zvaunofanirwa kuita kuzvimonera kunge hozhwa kuti ugadzire Kuvhurika. Iyo mweya inofanirwa kunamirwa mukati medenderedzwa rekutanga rawakanamira.
Penda iyo ne mwaya, yakanyanya kugadzikana pane nebrashi. Ini ndashandisa dorado asi zvakare inotaridzika zvakanaka kwazvo mu chena. Kana pendi yaoma shandisa zvakanyanya Glue chena nechimwe chezviso uye ndokuparadzira iyo kubwinya. Kana yaoma, kuva chena kupenya zvichaonekwa kuti chishongo chine Frost kwese kumeso uko.
La koteji Iyo ndiyo inotora kureba, asi ichiri zvakanyanya nyore.
Penda iyo kadhibhodhi chubhu yeruvara tsvuku. Cheka denderedzwa rabha kana tsvuku kadhibhodhi uye penda muganho wese uye mimwe mitsara sekunge yaive gonhi remapuranga. Namatidza denderedzwa kune chubhu. Kuita iyo denga cheka makadhibhokisi rectangle woapenda chena. Kuita iyo yakasakara mhedzisiro ipe iyo inobata ye rima nebhurashi rakaoma zvinyoro nyoro, uye kana iwe uchida kupusha zvakanyanya, zora zvishoma netishu kana pepa. Namatidza padenga pamusoro petsvuku chubhu.
Kuvhara buri pakati pedenga neimba, namatidza mamwe mashizha ekugadzira, uye kuwedzera rumwe ruzivo shandisa zvimwe silicone madenderedzwa pakati woipenda dorado. Pairi unama bhora dzvuku kana the pom pom.
Nyorera Pende chena pazasi peimba kutevedzera iyo nieve. Uye kana iwe ukaita buri padenga ukapfuudza tambo nepakati paro, unogona kurisungirira kubva ku Krisimasi muti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Kudzokorora » 3 Pfungwa dzekudzokorora makadhibhokisi machubhu uye kugadzira Kisimusi kushongedza
Gadzira yako wega ketetledrum, uchishandisa hari yevhu
Maitiro ekugadzira bhuku remabhuku kubva kubhuku rekuchikoro